Etu esi hazie ma hazie akwụkwọ ahụaja gị na KDE | Site na Linux
Etu ị ga - esi hazie ma hazie akwụkwọ ahụaja gị na KDE
Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, enwere nkuzi a ana m atụ anya ịhapụ ha ntakịrị ... KDE Ọ bụ gburugburu ebe obibi na - enye ohere ka onye ọrụ hazie kọmpụta ha n’ụzọ dị iche iche karịa gburugburu ebe ọ bụla, lee, m ga - akuziri gị ihe niile metụtara. akwụkwọ ahụaja.
N'ezie, nhọrọ ndị a niile nwere ike ịchọta na nhazi nhazi, mgbe ị nọ Gnome (dịka ọmụmaatụ) iji mezuo ọtụtụ ihe ọ dị mkpa iji wụnye ngwa ọhụụ, ọtụtụ oge anaghị emezu ihe niile ịchọrọ.
Ma hey, o zuru ezu kemgbe ahụ a setịpụrụ ọkụ banyere ndị ọrụ KDE na-akọwa na ule na azịza ebumnuche, banyere KDE na-enye ohere karịa Gnome, na ndị ọrụ Gnome na-anwa iji arụmụka arụmụka naanị na gburugburu ebe a (Gnome) na-ere obere ngwaike karịa KDE (nke bụ eziokwu).
1 Nhọrọ nhọrọ:
2 Na-edozi desktọpụ ọ bụla:
Kensinammuo, isi ihe iji hazie desktọọpụ bụ iji aka nri pịa ya ma anyị nweta Desktọpụ Mmasị, e nwere anyị ga-ahụ ihe ndị kasị ozugbo nhọrọ anyị nwere. Dịka anyị ga-ahụ na onyonyo a, anyị nwere taabụ abụọ, otu maka nhọrọ ozugbo maka desktọọpụ ahụ, nke ọzọ metụtara mmegharị ahụ:
Na taabụ a, anyị nwere ike ịkọwa otu anyị chọrọ akwụkwọ ahụaja anyị na ihe ọ ga-abụ, yana ịkọwapụta na anyị achọghị akwụkwọ ahụaja edoziri ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe mana na anyị na-ahọrọ ihe ngosi ma ọ bụ gallery, a na-enweta nke a site na ịhọrọ na «Akwụkwọ ahụaja»Nhọrọ nke«Presentación":
Na-edozi desktọpụ ọ bụla:
Anyị bipụtara nkuzi dị mfe, nke anyị ji akọwa etu esi eji akwụkwọ ahụaja dị iche na desktọpụ ọ bụla: https://blog.desdelinux.net/wallpapers-diferentes-escritorios-de-kde/
Na-eso nkuzi ahụ, anyị nwekwara ike itinye wijetị dị iche ma ọ bụ plasmoids na desktọọpụ ọ bụla. Yabụ, ọ bụrụ na anyị hazie desktọpụ anyị ka anyị nwee ahụaja dị iche na desktọpụ ọ bụla nke anyị, wijetị, plasmoids ma ọ bụ ngwaọrụ anyị nwere nwekwara ike ịdị iche na desktọpụ ọ bụla.
Enwere ike idozi akwụkwọ ahụ aja na KDE, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ha nwere ike ịbụ ebe ngosi ma ọ bụ ngosi, a na-enwetakwa nke a na-enweghị mkpa itinye ngwa mpụga, obere. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịnwe akwụkwọ ahụaja dị iche na desktọọpụ ọ bụla anyị nwere, si otú a na-enye anyị ohere ịhaziwanye karịa na gịnị kpatara ya? Greater A mara mma na kọmputa anyị 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Etu ị ga - esi hazie ma hazie akwụkwọ ahụaja gị na KDE
A dị ezigbo mma na akwụkwọ ahụaja nke nwa agbọghọ ahụ HAHA. Enwetụbeghị m okwu mmeghe ahụ, echere m na ọ na-eme ka anya m na-atụgharị, ị ga-aga tinye ya na sekọnd 10 ọ bụla. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụ nke mbụ
Ma hey, o zuru ezu kemgbe ahụ ọkụ ọkụ na-ewu
Aga m agwa gị otu ihe ahụ
Nah, anaghị m etinye ihe ngosi, naanị na enwere / nhọrọ, ịnwere ike itinye akwụkwọ ahụaja na-enweghị wụnye ngwa mpụga ma ọ bụ jiri aka dezie .XML (dịka na Gnome).
Ọ bụrụ na…. * - * .. Enwere m ịhụnanya na ya, akwụkwọ ahụaja kachasị mma m nwetụrụla HAHA.
Amaara m onye m nwere ike ime nọọsụ nọọsụ dịpụrụ adịpụ na-enwe ịhụnanya ... haha.
E kwuru nke ọzọ n'ihi na ọ ga-agwụ ike na obere oge. Na ihe Gnome, ọ bara uru ka ọ ghara ịpị ma ọ bụghị nke ukwuu, ee, m ka na-ahọrọ KDE
Onye ọrụ novice, noob zuru oke ma ọ bụrụ na ị gwa ya na ọ ga-edezi XML iji mezuo nke ahụ, ma ọ bụ wụnye ngwa ọzọ ... na njedebe, ọ ga-esi ike ma ọ bụ iru ala na ọ nwere nhọrọ ahụ ebe ahụ dịka na KDE.
Achọrọ m ịmụ azụ karịa ka e nyere azụ.
Eleghi anya ụzọ m si eche echiche dị ntakịrị ... mana, ọ bụrụ na a na-enye ihe niile n'aka ndị ọrụ novice, ọ bụrụ na ha enweta ya mgbe niile ma nwee ihe niile dị mfe dị ka o kwere mee, olee mgbe ha ga-akwụsị ịbụ ndị ọhụụ? Ọ dịghị onye na-amụta ma ọ bụrụ na ha edozi nsogbu ha n'oge a, ọ bụrụ na onye ọzọ na-eche maka ha, onye ọ bụla ga-eche ma chee echiche nke ọma, nke ahụ bụ otu ha si akwụsị ịbụ noob wee bido bụrụ ezigbo onye ọrụ.
Ezigbo Eduar2, nke ahụ bụ ihe gbasara ya, ọ bụghị maka ịdọta ndị ọrụ.
Kwe ka noobs ndị ahụ mụta idezi XML, kama ịjuju ọgbakọ na ajụjụ ha dịka:
«HOYGAN KIEM NE KWES TOR TO IMTALAREL MEZENYER NE UVUNTO URGE ME MUXO GRASIAS DE ANTEBRASO»
Hey Obi ike, gịnị kpatara o ji esighi n'ụmụ akwụkwọ ndị anyị na-amaghị amụ?
Obi ike +1: TEXTUAL.
KDE kacha ọhụrụ nke KDE dị: KDE 4.7.2
Akwụkwọ ahụaja dị iche na ibe desktọọpụ KDE ọ bụla